ကမျးလကျ | “ကန်ရေကလဲ့လွန်းတော့ လရောင်ကို ငုံ့နမ်းမိကြပေါ့ ...”
မြန်မာတွေ ချယ်လ်ဆီး သောက်ကြတယ်
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 10/14/2012 - No comments
တံခါးဖွင့် စီးပွားရေး ခေတ်မှာ ဆင်းရဲသားတွေက
ကိုယ့်ဘာသာ ငွေစုပြီး လန်ဒန်က ဘောလုံးအသင်းကို ထောက်ပံ့တယ်။
မြန်မာတွေ ထိုင်းတွေက ထေရဝါဒလို့ အော်ကြတယ်
ကြုံတိုင်းလည်း ငါးပါးသီလတွေ နှုတ်တက် ရွတ်ဆိုကြတယ်
ဘီလျံနာ အေဘရာ မိုဘစ်ကို အခွန်ပေးနိုင်တာက
မြန်မာ နဲ့ ထိုင်း က ဘီယာ နဲ့ ဝီစကီ ကုမ္ပဏီ တွေ။
မြန်မာတွေ ချယ်လ်ဆီး သောက် နိုင်ကြပြီ်။ ။
ပရီးမီးယား လိဂ် အစား သတင်းသုံးပုဒ်
၁ ။ အိုင်တီ သတင်း
ဝါရှင်တန် ပို့စ်က နောက်တောက်တောက် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ပါလာပါတယ်။
ဒိုင်နိုဆော၊ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်။ The Dinosaur. Extinct
မမ်မို့သ်၊ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်။ The Mammoth.Extinct
ဒိုဒို ၊ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်။ The Dodo. Extinct
မောက်စ်။ မျိုးတုန်း ပျောက်ကွယ်ရန် အကြီး အကျယ် အန္တရာယ် ရှိ။ The mouse. Endangered.
အိုင်ပက် ယဉ်ကျေးမှု ပညာရေးလောကမှာ ထွန်းကားလာတဲ့နောက် ၁၂ အောက် အမေရိက ကလေးတွေဟာ မောက်စ်ကို မသုံးကြရုံသာမက ဒါက ဘာလဲ လို့တောင် မေးကြပါသတဲ့။
၂ ။ အခွန်ရှောင်တဲ့ သူဌေးပေါက်စ
အမေရိကမှာ ဒီအပတ် ပြောစမှတ်ဖြစ်နေတာက ဘီလျံနာ သူဌေးလေး Eduardo Saverin က အခွန် မပေးချင်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား အဖြစ် ခံယူလိုက်ခြင်းပါ။ သူဟာ နှယ်နှယ် ရရ သူဌေး မဟုတ်ပါဘူး၊ Facebook စီအီးအို Mark Zuckerberg အလုပ် စတင်နိုင်အောင် ငွေ အရင်းအနှီး ထုတ်ပေးခဲ့သူလေးပါ။ သူ စင်္ကာပူ နိုင်ငံသား အဖြစ် ခံယူလိုက်ခြင်းက အခွန်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး လို့ သူက ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူကမှတော့ မယုံကြည် ကြပါဘူး တဲ့။
၃ ။ သမ္မတကြီး ပေးလိုက်ရင် ပြီးရော
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ပြောပါတယ်။ အီးယူကို ပေးလိုက်တော့ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။
ဆုယူတော့ရော ဘယ်သူတက်ယူမှာတုန်း။အီးယူ ဥက္ကဋ္ဌ Herman Van Rompuy လား ယူရိုပီယံ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ Jose Manuel Barroso လား။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု တက်ယူဖို့ ( မြန်မာ တချို့လို ) ရန်ဖြစ်နေကြမှ ဒုက္ခ။
ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ပေးရတာလည်းဆိုတော့ ၁၉၅၀ ခု တွေကစလို့ ပြင်သစ် နဲ့ ဂျာမနီ၊ ပြီးတော့ ဥရောပ သမဂ္ဂကို ညီညွတ်အောင် ပေါင်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့ လို့ တဲ့။
လှတယ်။ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားသာ နိုဘယ်ဆု ရစဉ်က ဘာမှ မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ် သူ နိုဘယ်ဆု ရစဉ် သူပြောခဲ့တာက သူ တကယ် မလုပ်ရသေးတာတွေ အတွက် ရတဲ့ ဆု တဲ့။
ဒီတစ်ခါ ပြောင်းသွားပြီ။ လုပ်ခဲ့ဖူးတာတွေ အတွက် ပေးတဲ့ နိုဘယ်ဆု ဖြစ်သွားပြီ။ အနာဂတ်၊ အတိတ် အတွက် ပေးတဲ့ နိုဘယ်ဆုတွေ။ ပစ္စုပ္ပန်မပါဘူးလို့ ပြောစရာ ဖြစ်နေတာပါ။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ သမ္မတကြီးကို ပေးလိုက်ရင် ဘာမှ ဝေဖန်စရာ မရှိတော့ဘူး။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ရောက်ရင်လည်း " ဝိတ် " ညီသွားမယ်။ ဟိုဖက်ကလည်း နိုဘယ် ဆုကြီးနဲ့ ဒီဖက်ကလည်း နိုဘယ် ဆုကြီးနဲ့။
အဲသလို ရွေးကောက်ပွဲမျိုး ဘယ်နိုင်ငံမှ မရှိလောက်သေးဘူး။ နာတာမှ တကယ် နာ။
စီးပွားရေး ပဉ္စလက် ( ၁း၂ )
in Hard Truths By Lee Kuan Yew, ဇင်ဝေသော် - on 10/13/2012 -4comments
မေး ။ ။ ဖော်ကျွန်းမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ (၅၀၀) စာရင်းမှာ ဥရောပနိုင်ငံ သေးသေးလေးတွေက ကုမ္ပဏီတွေ တော်တော်များများ ပါနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဖင်လန်က နှစ်၊ ဆွီဒင်က ခြောက်၊ ဆွစ်ဇာလန်က ဆယ့်လေး ကုမ္ပဏီတောင် ပါနေတယ်။ စင်္ကာပူက လုံးဝ မပါဘူး။
ဖြေ ။ ။ အရင်ဆုံး သူတုိ့ရဲ့အားသာချက်ကို ပြောပြမယ်။ သူတို့မှာ ဥရောပတစ်တိုက်လုံး ဈေးကွက်ရှိတယ်။ ဒီတော့ သူတို့က နယ်ပယ်ကျယ်တယ်။ အခြေ ပိုခိုင်တယ်။ ဥရောပနိုင်ငံသားတွေ အားလုံးဟာ ပက်စ်ပို့ဒ် မပါဘဲ ဥရောပနိုင်ငံတိုင်းကို သွားလို့ရတယ်။ မင်းက ဆွီဒင်လို့ ပြောတယ်။ တကယ် စီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေက ဆွီဒင်လူမျိုးတွေချည်း မဟုတ်ဘူး။ အနောက်ဥရောပသားတိုင်း စီးပွားရေး ဝင်လုပ်လို့ ရတယ်။ သူတို့ နောဒစ်နိုင်ငံသားတွေ အားလုံးက အပြန်အလှန် ပြောင်းလဲခွင့် ရှိကြတယ်။ ဒိန်းတွေ၊ ဆွီဒီတွေ၊ နော်ဝေးဂျီးယန်းတွေက လူမျိုးစု တစ်စုတည်းရယ်။ အိုင်ယာလန်ဆိုရင်လည်း အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေက အခြေချနေထိုင်သူတွေနဲ့ စင်္ကာပူထက်တောင် လူမျိုးစုံသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဂျူးလူမျိုး အိုင်းရစ်တွေက အများကြီး။ သူတို့က အရည်အချင်းကို အဲ့သလို လူတွေဆီက ရွေးယူတာ။ အဲ့ဒါ အဓိက အားသာချက်ပဲ။ ငါတို့ စင်္ကာပူက အင်ဒိုနီးရှားက ပိတ်လိုက်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်က ပိတ်ဆို့လိုက်နဲ့ ဘယ်မှာလဲ ဈေးကွက်။
စင်္ကာပူမှာ ဒီလိုပြဿနာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတော့ ဒီကိစ္စတွေအကြောင်းပြောရင် အစကို ပြန်သွားပြီး ပြောဖို့လိုတယ်။ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ၊ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေ ရောက်လာပြီး တစ်ခြားကို ပြန်သွားကြတယ်။ သူတို့က ပြောတယ်။ ငါတို့က စီးပွားရေးသမားကြီးတွေ မွေးထုတ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ စီးပွားရေးနဲ့ အမီလိုက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ ဘယ်လိုလုပ် မွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာလဲ။ ဟောင်ကောင်တို့၊ ထိုင်ဝမ်တို့လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ အခြေခံ အရင်းအမြစ်တွေ မရှိဘဲ R & D စီးပွားရေးတွေမှာ သူများနဲ့ ယှဉ်ပြီး ဘယ်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာလဲ။
တို့သာ ဂျူးတွေဆိုရင်တော့ စွမ်းကောင်းစွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ဂျူးတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဦးနှောက်စွမ်းရည် အကောင်းဆုံး လူမျိုးတွေ။ "The Economic" ဖတ်တုန်းက တွေ့လိုက်ရတယ်။ ရုရှားကဂျူးတွေ အစ္စရေးကို ပြန်သွားကြတော့ လူတွေက သူတို့ကို လိုက်ရှာကြည့်ကြတယ်တဲ့။ လူတစ်ယောက် လက်ဆွဲအိပ်ကြီးကြီးကို သယ်ယူလာတယ်ဆိုရင် သူ့မှာ ဘေ့(စ်)ဂစ်တာကြီး ရှိတယ်တဲ့။ သေးတဲ့အိပ်နဲ့ လူဆိုရင် သူ့မှာ တယောပါတယ်။ ဒီထက် အိပ်ကသေးမယ်ဆိုရင် ထရမ်းပက် ပါလာသူတဲ့။ လူတစ်ယောက်က အိပ်ကို ပါမလာဘူးဆိုရင်တော့ သူက စန္ဒရားဆရာလား၊ သိပ္ပံပညာရှင်လားပဲတဲ့။ သူတို့ဆီမှာ မှတ်တမ်းနုတ်တွေပဲ ပါတယ်။ တကယ် အရည်အချင်းရှိတဲ့လူတွေ။ ရုရှားက ရူးလို့ သူတို့ကို မောင်းထုတ်တာ။ အဲ့ဒီ ဂျူးတွေက ရုရှားကို ကောင်းကောင်း အလုပ်အကျွေး ပြုထားနိုင်တယ်။
ကံကောင်းလို့ ငါတို့စနစ်က မှန်သွားတယ်။ တံခါးဖွင့်ရအောင်၊ အဲ့ဒီအထဲက အကောင်းဆုံးတွေကို ရွေးယူရအောင်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။ အခု တရုတ်ပြည်ဆိုရင် စက်မှုစီးပွားရေးမှာ ဂျပန်တွေ၊ ကိုရီးယားတွေလို လုပ်ယူလို့ ရတယ်။ တရုတ်တွေက မရူးဘူး။ သူတို့မှာ ဦးနှောက်အရည်အသွေး ရှိတယ်ဆိုတာ သိကြတယ်။ သူတို့ဆီက အတော်ဆုံးလူတွေကို ထိပ်တန်းကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေ၊ သုတေသနဌာနတွေမှာ ကောင်းကောင်း လေ့ကျင့်ပေးနေကြတာ။
သူတို့ဘာသာသူတို့ ချန်ပီယံဆိုတဲ့ကားတွေ ထုတ်ကြမလား။ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က MNC တွေကို ဝင်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာ။
ကောင်းပြီ။ ခင်ဗျားတို့ကား မော်ဒယ်အဟောင်းတွေကို ယူခဲ့။ ဒီက အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ဒီဇိုင်နာတွေ၊ အလုပ်သမားတွေကိုသာ ငှါးပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ပြောတယ်။ တရုတ်တွေက သူတို့ဘာသာ သူတို့ဆိုရင် Hyundai တို့ Toyota တို့ကို မယှဉ်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ထိပ်တန်းဦးနှောက်တွေနဲ့ဆိုရင် မကြာခင် သူတို့ Lexus တို့၊ မာစီးဒီးတို့ ထုတ်လုပ်လာလိမ့်မယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Jumbo လေယာဉ်ကြီးတွေတောင် ထုတ်လုပ်လာကြဦးမှာ။
မေး ။ ။ ဒီလိုဆိုရင် စင်္ကာပူက ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက် အမြဲတမ်း နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေကို မှီခိုနေရမှာပေါ့။
မေး ။ ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က MNC (Multi National Company) အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ လက်အောက်ခံ စီးပွားရေးအနေနဲ့ပဲ ရှိနေတော့မှာပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ငါက မင်းတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ကြည့်မိဖို့ လက်ညှိုးထိုးပြတာ။ ကောက်ချက်ကတော့ မင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ ဆွဲယူကြပေါ့။ တို့က ဥရောပထဲမှာလား၊ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ရပ်ဝန်းထဲမှာလား။ ပစိဖိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ အသေကောင်ပဲ။ တို့က ဖီဂျီဆိုပါစို့။ ဖီဂျီကို ခု ဘယ်သူ လေယာဉ်နဲ့ သွားသေးသလဲ။ ဟိုတုန်းကတော့ ဩစတေးလျသွားဖို့ ဖီဂျီကနေတဆင့် သွားကြရတယ်။ အခု ဖီဂျီကိုသွားတယ်ဆိုတာကတော့ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရက်ရှည်ရှည် ဟောလီးဒေးထွက်ဖို့လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ဒီတော့ အခု ဖီဂျီဆိုတာက အမေရိကန်တွေ ဟောလီးဒေးသွားတဲ့ နေရာအဆင့်မှာပဲ ကျန်တယ်။ သဲသောင် ဖွေးဖွေးတွေ၊ ဆက်ဆံရလွယ်ကူတဲ့လူတွေ၊ အုန်းပင်အုန်းသီးတွေ၊ တိုးရစ်တွေကို ကောင်းကောင်း ဆားဗစ်ပေးတဲ့ အမေရိကန်ပိုင်တဲ့ ဟိုတယ်တွေ ... ဒါတွေပဲ ရှိတယ်။
တို့က စင်္ကာပူ၊ လူနှစ်သန်းလောက် ဈေးကွက်ရှိတယ်။ ပထမမျိုးဆက်ရဲ့ သက်တမ်းအတွင်းမှာပဲ လှေကားထောင် တက်ခဲ့ကြတယ်။ တို့ ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ကြရသလဲ။ ပြင်ပကမ္ဘာကို သေသေချာချာ အကဲခတ်ပြီး ကြည့်။ ဒါ တို့ သွားရမယ့်လမ်း။ စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးကို ရအောင်ညှစ်ထုတ်ယူပြီး ရောက်အောင် သွားကြရမယ်လို့ ကြုံးဝါးခဲ့ကြတယ်။ ဒီအဆင့်ထက်မြင့်အောင် ဘာဆက်လုပ်ကြရမလဲ။
တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယတို့ အကြီးအကျယ် မလုပ်လောက်တဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာ အာရုံစူးစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြမယ်။ အဲ့သလို ဘောင်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီအရည်အချင်းတွေမှာ တရုတ်တို့၊ အိန္ဒိယတို့က တို့ကို မယှဉ်နိုင်ဘူး။ ဥပမာ... ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာအသိပညာတွေ လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပေးနိုင်မှု၊ သန့်ရှင်းမှု၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေပဲ။ ဒီအရည်အချင်းတွေကို မီဖို့ တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယအဖို့ အချိန် တော်တော် လိုနေလိမ့်ဦးမယ်။
တကယ်လို့ ဂျိုဟိုးမှာသာ Shenzhen ( ဟောင်ကောင် တစ်ဖက်ကမ်းက အထူးစီးပွားရေးဇုန် ရှန်ဇန်း (သို့) ရှင်ကျန့် ) ရှိရင် "ကောင်းပြီ၊ ထိုင်ပြီး ဆွေးနွေးကြရအောင်၊ တို့ သူတို့နဲ့ ဝင်ပေါင်းကြမလား" လို့ ပြောမိမှာပဲ။ ငါ ရီစရာ ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ Shenzhen ကိုသွားလို့ အားလုံး အကောင်းချည်းလို့တော့ ပြောမရဘူး။ ကောင်းတာတွေ တော်တော်များများ ရှိမယ်။ Shenzhen က မင်ဒရင်းစကား ပြောတာ၊ ကင်တိုနီး မပြောဘူး။ ၁၉၈၀ - ခုနှစ်မှာ တိန့်ရှောင်ဖိန်လည်း တံခါးဖွင့် ပေးလိုက်ရော အထူးစီးပွားရေးဇုန်အနေနဲ့ ချက်ချင်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ရွာသေးသေးလေး တစ်ရွာကနေ လူဦးရေ (၇) သန်းရှိတဲ့ စီးပွားရေးမြို့တော်ကြီးဖြစ်ဖို့ နှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်လေးပဲ ကြာလိုက်တယ်။ ဟောင်ကောင်က လူတွေ အဲ့ဒီကို သွားပြီး ဆံပင်ညှပ်ကြ၊ လက်သည်းညှပ်ကြ၊ ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ချုပ်ကြ လုပ်ကြတယ်။ ဟောင်ကောင်က စက်ချုပ်သမားတွေက သူတို့ကို မယှဉ်နိုင်ဘူး။
မေး ။ ။ စင်္ကာပူမှာ ပြည်တွင်းဖြစ် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အားနည်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူထုမြင်နေတာက စင်္ကာပူအစိုးရက အပြည်အပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးတွေကို အားပေးသလို ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အားမပေးလို့ လို့ ဖြစ်နေတယ်။
ဖြေ ။ ။ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝ မမှန်ဘူး။ အမေရိကန်တွေရဲ့ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးသမားတွေက အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့မှုကို တောင်းခံမနေကြဘူး။ Silicom Valley မှာဆိုရင်လည်း သူတို့ ကားသိုလှောင်ရုံတွေ၊ တင့်ကားတွေ တည်ဆောက်ပြီး သူတို့စီးပွားရေး သူတို့ ရှာကြတာပဲ။ အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံ့ကို လိုချင်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သူတို့ကို စီမံကွပ်ကဲမှု သင်တန်းတွေ ပေးရတော့မယ်။ ချေးငွေတွေ ထုတ်ချေးရတော့မယ်။ သူတို့က ဒီကိစ္စတွေမှာ မတော်ဘူး။ ဒီတော့ သူတို့ဘာသာ သူတို့ပဲ လုပ်ကြတယ်။
ငါ အခုပြောတာကိုလည်း မမေ့နဲ့။ ထိပ်တန်းကို ရောက်နေတဲ့လူတွေဟာ စီးပွားရေးမှာသာ လာဘ်မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေက သိပ်ကောင်းတယ်။ Bill Gates ၊ Michael Dell ၊ John Chambers တို့ကိုကြည့်။ ငါ သူတို့နဲ့ တွေ့ဖူးတယ်။ တော်တော် စွမ်းနိုင်တဲ့လူတွေ။
အဲ့သလို စွမ်းနိုင်တဲ့လူတွေ တို့မှာ ဘယ်ရှိလို့လဲ။ ဘယ်မှာ သွားရှာမလဲ။ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စီးပွားရေးလောကထဲမှာ ရှာမှာလား။ မရဘူး။ အဲ့ဒီလောကထဲမှာ ဒုတိယတန်းစားနဲ့ တတိယတန်းစားတွေပဲ ရှိတယ်။ ပထမတန်းစားတွေက သူတို့ဆီမှာ (ငါတို့ဆီမှာ) အလုပ် မလုပ်ဘူး။ ဒါက ငါတို့ ကံကြမ္မာပဲ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။
မလေးရှားရော ဘယ်လို လုပ်ခဲ့သလဲ။ သွင်းကုန်တွေအားလုံး ပိတ်။ မင်းတို့လာပြီး Petronas (ရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီ) မှာ လာလုပ်၊ ပြီုးရင် Proton (ကားကုမ္ပဏီ) ကို လာလုပ်လို့ ပြောကြတယ်။ သူတို့ ပရိုတွန်ကားတွေ စလုပ်တော့ jurgen Schrempp (မာစီးဒီးကားကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ) က ငါ့ကို ပြောဖူးတယ် "ပျက်စီးပြီ" တဲ့။ အမှန်ပေါ့။ လုံးဝ ပျက်စီးသွားတာပဲ။ စီးပွားရေးအတူလုပ်ဖို့ တံခါးလည်း ဖွင့်ပေးထားသေး၊ ကိုယ့်ဟာကိုလည်း အသေးစားထုတ်ကုန်တွေ ခွဲပြီး ထုတ်ချင်သေး။ ဒါမျိုးလုပ်လို့ ရမလား။
ထိုင်းကိုလည်း ကြည့်။ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ Detroit ဖြစ်နေတယ်။ စပယ်ယာပတ်ပစ္စည်းလေးတွေ သူတို့ဆီမှာလုပ်၊ ကားတွေကို သူတို့ဆီမှာဆင်။ ဒါမျိုးလောက်နဲ့ သွားယှဉ်လို့ ဘယ်ရမှာလဲ။ သူတို့ ပရိုတွန်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုပြီး မလေးရှားတွေက သွင်းကုန်တွေအားလုံး ပိတ်ဆို့၊ လွတ်လပ်စွာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစာချုပ်ကို ဆိုင်းငံ့ထား ... တဲ့။ အဲ့ဒါ သူတို့ လူမျိုးရေးသိက္ခာကိစ္စ။ သူတို့ ပရိုတွန်ကို ကာကွယ်နိုင်ရဲ့လား။ Volkswagen က ဝယ်ယူဖို့ ပြောတယ်။ သူတို့က ငြင်းတယ်။ မလေးလူမျိူးပဲ ဦးစီးရမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ စီးပွားရေးက အခုထိ အရှုံး မရပ်သေးဘူး။ ငါဆိုရင် "ဒီကုမ္ပဏီကို ဖြုတ်လိုက်တော့။ ဒီကုမ္ပဏီက အောက်ခြေကနေ ဘယ်တော့မှ တက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အရှုံးနဲ့ လုံးခြာလိုက်နေမယ့်စက်ရုံပဲ" လို့ ပြောမိမှာပဲ။
စီးပွားရေး ပဉ္စလက် (၁)
in ဇင်ဝေသော်, ပြုံးစိစိ - on 10/12/2012 - 1 comment
ဖြေ ။ ။ ရုရှား စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက် ပြောဖူးပါတယ်။ တော်လှန်ရေးသမား စစ်စစ်တွေဟာ ပထမ နိုင်ငံခြားသားတွေကို တော်လှန်ပါတယ်။ တော်လှန်ဖို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အချင်းချင်း အုပ်စုခွဲပြီး ဆက်လက် တော်လှန်ကြပါတယ် တဲ့ ။ ကွန်စစ်စတင့် ဖြစ်လို့ ချီးကျူး စရာပါ။
မေး ။ ။ အနောက်က အမျိုးသားတွေ နဲ့ အာရှ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျတာ များပြီး အနောက်က အမျိုးသမီးတွေ နဲ့ အာရှ အမျိုးသားတွေ အိမ်ထောင်ကျတာ တော်တော်နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ လို့ မေးတဲ့ အခါမှာ အာရှ အမျိုးသမီးတွေက ရင့်ကျက်တယ် ( Girl ) ဂါးလ် ကနေ (Lady ) လေဒီ ဖြစ်လာကြတယ်၊ အာရှ အမျိုးသားတွေကတော့ အသက်ကြီးလာပေမယ့် ( Man )မဲန်း ဖြစ်မလာဘဲ ( Big boys ) ဘစ် ဘွိုင်းပဲ ဖြစ်နေကြလို့ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ။ ဘာမှ မပြောချင်ပါဘူး။ အာရှ အမျိုးသားတွေက အာရှ အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုပြီး ကွန်စစ်စတင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကတောင် သိနေမှပဲ။
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ခံယူမည် ...
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 10/11/2012 - No comments
ဟူသော သတင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ...
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်လည်းကောင်း၊ သံအမတ်ကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် လည်းကောင်း၊ ထိုသတင်းကို ဖတ်ရ၊ ကြားရပြီး ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်ကြရသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အတွက်လည်းကောင်း သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ်ပါ၏။
(ဓါတ်ပုံကို forward mail မှရရှိပါသည်။)
၂။ ထိုသတင်းနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြောင်းကလည်း ထူးထူးခြားခြား စဉ်းစားစရာမလိုဘဲ ခေါင်းထဲရောက်လာသည်။
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ …
(က) အမေရိကန်အစိုးရက မည်သို့ တုန့်ပြန်လာမည်နည်း။
(ခ) သူ၏ မူလဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တို့က မည်သို့ တုန့်ပြန်လာမည်နည်း။
(ဂ) အမေရိကန်လူထုကရော မည်သို့ တုန့်ပြန်လာမည်နည်း။
အမေရိကန်တို့သည် အမေရိကန်တို့ ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား တုန့်ပြန်နေကြမည် မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဟူသည် လူတိုင်းရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည့် လူ့အခွင့်အရေး မဟုတ်ပါလား။
၃။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုပါမည်။
အမေရိကန်သို့ သံအမတ်အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရသော မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ သံအမတ်ကြီးသည် ပရိုတက်စတင့် ခရစ်ယန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းသွားသည် ဆိုပါစို့။
(က) မြန်မာအစိုးရက မည်သို့ တုန့်ပြန်လေမည်နည်း။
(ခ) ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တို့၏ တုန့်ပြန်မှုက မည်သို့ ဖြစ်လေမည်နည်း။
(ဂ) မြန်မာပြည်သူလူထုကရော မည်သို့ တုန့်ပြန်လာလေမည်နည်း။
ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးတော့ မဖြစ်လောက်၊ “သာသနာဖျက်ကောင်” ဘာညာစသည် မသုံးစွဲကြလောက်ဟု ထင်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားသော၊ ယဉ်ကျေး၊ ရင့်ကျက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဟု ဆိုနိုင်ပါပြီ။
၄။ အမေရိကန်တို့ မခေကြ ။
မန္တလေးမှာနေစဉ်က အမေရိကန်၊ ဂျာမန် နှစ်ယောက်နှင့် မင်းကွန်းဖက်သို့ လိုက်သွားခဲ့ဖူးသည်။ အမေရိကန်တွေနှင့် အင်္ဂလိပ်စကား ပြောရခြင်းသည် အလွန်ပညာရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မင်းကွန်းသို့ရောက်၊ လည်ပတ်ပြီး အအေးဆိုင်၌ အအေးသောက်ရန် ထိုင်သောအခါ ဆိုင်က လူရှုပ်နေသဖြင့် စားပွဲထိုးလေးက လက်မအား၊ ကိုယ်တိုင်သွားယူမှ ရမည့်သဘော ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် လူလည် အမေရိကန်က ဂျာမန်ကို သွားယူပေးရန် ခိုင်းသည်။ ဂျာမန်ကလည်း သူ လူလည်လုပ်သည်ဟု ထင်သဖြင့် သွားတော့ ယူမည်။ သို့သော် ရဟန်းအတွက်နှင့် သူ့အတွက်သာ ယူမည်။ အမေရိကန်အတွက် ယူမပေးနိုင်ဟု ဆိုသည်။
ထိုအခါ အမေရိကန်က အပြုံးမပျက်၊ နှစ်ယောက်သွားရန် မလို၊ တစ်ယောက်ဆို ရပြီ၊ သူသွားမည်၊ သုံးယောက်စလုံး (ရဟန်းတစ်ပါးနှင့် လူနှစ်ယောက်) အတွက် သူ ယူခဲ့ပါမည်ဟုဆိုကာ ထွက်သွားသည်။
အမေရိကန် လူလည်ကျသွားပုံကို ထိုရောက်မှ မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ့အပြုအမူအရ ဂျာမန်ကပင် ကလေးကလား ဆန်သွားတော့သည်။ သူက လူကြီးလူကောင်းဆန်သည်။ “မင်းက ငါ့အတွက် လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ငါကလည်း မင်းအတွက် လုပ်မပေး” ဟူသော ကလေးဆန်မှု သူ့မှာ မရှိ။ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ ဂျာမန် လုံးဝ ရှုံးသွားသည်။
ထို့ကြောင့် ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ အမေရိကန်တို့က မခေကြ၊ ရင့်ကျက်၊ ယဉ်ကျေးကြ၏။
ဤအဖြစ်အပျက်ဖြင့် သံအမတ်၏ ဗုဒ္ဓဘာသာခံယူမှုသည် ဘာသာရေးစစ်စစ် မဟုတ်နိုင်ဟု ကျွန်ုပ် ပြောနေခြင်း၊ စွပ်စွဲနေခြင်း မဟုတ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာမိသော ပညာတတ်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကြီးများ ဖြစ်သွားတတ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်က အခြားနိုင်ငံများက “အမေရိကန်တွေ ရွှေ့လိုက်တဲ့ အဓိကကျားကွက်တိုင်းဟာ အမှန်တွေချည်းပဲ။ သူများထက် အမြဲတမ်း လက်ဦးနေတာပဲ” ဟု ဆိုလာသော် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ပြောရန် စကားတော့ ရှိမည်မဟုတ်။
အောက်တိုဘာ (၃၀) ရက်ကျော်ပါက ထိုအမေရိကန် သံအမတ်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (၅) ယောက်တွင် တစ်ယောက် အပါအဝင် ဖြစ်သွားနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ယခုပင် သူက ပြည်သူ့နှလုံးသားထဲ ရောက်နေပေပြီ။ သေချာသည်က အမေရိကန်၊ မြန်မာ ဆက်ဆံရေး ပို၍ အားကောင်းလာပေတော့မည်။ သူများကို မဆိုလို၊ သီဟနာဒ မျက်စေ့ထဲမှာပဲ ထိုသံအမတ် ဇနီးမောင်နှံက အရင်က မြင်ဖူးတာထက် ပို၍ ကျက်သရေ ရှိနေ၏။ အမေရိကန်တို့ မခေကြ။ ယဉ်ကျေး၊ ရင့်ကျက်ကြ၏။ တနည်းဆိုရသော် အမေရိကန်တို့သည် political science ၊ Social science တို့၌ကျမ်းကျေ၏။
၁။ လူသားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ရဲ့လား ငါ့ရှင်(စာသံပေသံ)။ လူမှ ဟုတ်ရဲ့လား (အရပ်စကား) ၂။ ယောက်ျားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ရဲ့လား ငါ့ရှင်(စာသံပေသံ)။ ယောက်ျားပီ...
"တစ်ကျောင်း တစ်ဂါထာ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်း" က ဆိုရိုးစကားဖြစ်ချေ သည်။ ယနေ့ ခေတ်စကားဖြင့် လစ်ဘရယ်ဖြစ်သည်ကို ဆိုခြင်းလား၊ ညှိနှိုင်း လို...
၁။ (က)ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့၏စကားကို မှတ်သားတတ်ခြင်း။ (ခ)အကျိုးအမြတ်မရှိလှဟု ထင်ရသော်လည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်ကိုင်ရဲခြင်း။ ဇာတ်တော်ထဲလာလူင...
© Copyright 2011- ကမျးလကျ - All Rights Reserved - Powered By Blogger.com